फिल्मले देशलाई कसरी खबरदारी गर्छ ? | साहित्यपोस्ट
द न्यु योर्क टाइम्स प्रकाशित २३ आश्विन २०७८ १४:५७
फिल्म निर्देशक गिडी दार
इजरायली प्रधानमन्त्री नफताली बेनेटले संसद भवनमा विभाजित राजनीतिका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै देश एक सूत्रमा रहनुपर्ने बताउँदै गर्दा एउटा इजरायली फिल्मको उदाहरण दिँदै थिए । उदाहरण मात्र होइन, उनले सबै सांसदहरूले यो फिल्म अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यति मात्र होइन, इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले पनि यो फिल्म इजरायलका प्रत्येक बालबालिकाले हेर्नै पर्ने वक्तव्य दिएका थिए ।
आखिर यो फिल्म के हो ? किन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समेत सो फिल्मका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् त ?
यो फिल्म हो, एनिमेटेड फिल्म, ‘लिजेन्ड अफ डिस्ट्रक्सन’ । २ हजार वर्षअघि जेरूसलेममा घटेको एउटा घटनामाथि बनाइएको फिल्म । फिल्मले चर्को वादविवादमा जकडिएको राजनीति र देश कसरी भड्खालोमा जाकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक घटनामा आधारित छ ।
यहुदी इतिहासमा यसलाई पहिलो विद्रोहका रूपमा पढाइन्छ । यहुदीहरूले रोमन साम्राज्यका विरूद्धमा पहिलो पटक विद्रोह गरेका थिए । विद्रोह रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो । यति मात्र होइन, द सेकेन्ड टेम्पल भनिने पवित्र मन्दिर पनि सो बेला ध्वस्त भएको थियो ।
यहुदीको रोमनविरूद्धको विद्रोह पछि एकअर्काप्रति नै लक्षित मात्र भएन, स्वयं यहुदीहरूको काल बनेर निस्कियो । आधारहीन घृणा सो गृहयुद्धको कारक थियो र त्यसले सर्वनाश गर्न पुग्यो। यसले जेरूसलेमको पतनका लागि भूमिका खेल्यो ।
यसै विषयमा बनाइएको लिजेन्ड अफ डिस्ट्रक्सन मरिसकेको यहुदी आत्मा खोज्ने काम भएको र यसले इतिहासले अहिलेको इजरायललाई पाठ पढाउने अपेक्षा नयाँ नेताहरूको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाका कारणले दुई इजरायली राजनीतिक पार्टीको यति तिक्ततापूर्ण ‘युद्ध’ भयो, त्यसका कारण इजरायलमा पहिलो पटक अरब पार्टीको उदय मात्र भएन, उसले केही सिटसमेत हात पार्यो । यसमा इजरायलका तीन पार्टीहरू सेन्टर, लेफ्ट र राइट मात्र होइन, अरब पार्टीको पनि अस्तित्व देखियो ।
फिल्मको कथानक ईशापूर्व ६६ ताकाबाट शुरू हुन्छ । त्यसपछि इजरायल वरपरका युद्ध सरदारहरू एकअर्काको सम्पत्तिमा आधिपत्य जमाउन खेतखलिहान नै जलाउन थाल्छन् । चाँडै नै अन्नको कङ्गालीपछि सर्वसाधारणको यति विचल्ली हुन्छ कि यसपछि रोमनहरूले कहिल्यै जित्न नसकेको इजरायल रोमन अधिनमा पुग्छ ।
इजरायलका पार्टीहरूबीच अहिलेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, एकअर्कामाथि प्रहारलाई फिल्मको ऐतिहासिकतामा पनि प्रस्टसँग झल्काइरहेको केही विश्लेषकहरूको राय छ ।
द न्यु योर्क टाइम्स २२ जेष्ठ २०७८ १२:०१
१७ श्रावण २०७७ ०६:००
यतिबेला इजरायलले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ, खासगरी पहिचानको राजनीतिका कारण यहाँ वास्तविक इजरायली, अरब इजरायली, युरोपेली यहुदी, अन्य यहुदी, अफ्रिकी यहुदी अनेक ससाना झुन्डमा मुलुक बाँडिन थालेको छ । राजनीतिले झगडाको बिउलाई सल्काइरहेको छ ।
इतिहासकारहरू इजरायलको अस्तित्व प्रायः ८० वर्षमा समाप्त हुने गरेको उदाहरण अघि सार्दै चर्को राजनीतिक मतभेदले कतै इजरायलकै अस्तित्व त धरापमा पर्दैन भनी छलफल चलाइरहेका छन् ।
सन् १९४८ मा मुलुकका रूपमा स्थापित भएको तथा मान्यता पाएको इजरायल स्थापना भएको यो वर्ष ७० वर्ष पुग्दैछ । यस्तोमा के अब यसको आयु १० वर्ष मात्र हो त भनी आशंका जताउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ ।
यसअघि इजरायलको इतिहासमा दुई पटक मुलुक स्थापनाका प्रयास भएका थिए । ती दुवै प्रयास आन्तरिक किचलोका कारण ध्वस्त मात्र भएन, यहुदीहरूले आफ्नो जन्मभूमि नै त्याग्नु पर्यो । अहिले समेत गरेर इजरायलको स्थापना तेस्रो पटक हो ।
यत्तिको राजनीतिक तरङ्ग ल्याउने फिल्मकर्मी गिदी दारले आखिर यो फिल्म किन बनाए त ? उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, इजरायल यतिबेला आध्यात्मिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यसले अहिले आत्मा खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यही कुरा महसुस गरेर मैले ऐतिहासिक घटनामार्फत वर्तमान इजरायलले भोगिरहेको सङ्कटलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु ।’
राजनीति, सामाजिक सञ्जाल र समाजमै पनि यति तिखा तिखा कुरा हुन्छन् कि तिनले समाजलाई क्षतविक्षत बनाइरहेका छन् । तिनलाई जोड्ने कडीको अभाव सर्वथा खड्किरहेको देखिन्छ । धेरै ढिलो हुनुअघि हामी सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन फिल्म निर्देशक गिदी दारले फिल्म निर्माण गरेको बताइरहेका छन् ।
‘हजार वर्षअघि के भएको थियो, हाम्रा पुर्खाले त्यसको पाठ हामीलाई छाडेर गएका छन्,’ निर्देशक दार भन्छन्, ‘हामीले त्यसलाई मनन गरेर त्यसलाई प्रयोग गरे मात्र पुग्छ ।’
निर्देशक दारले यो एनिमेटेड फिल्म बनाउन १५०० पेन्टिङको सहारा लिएका छन् । इजरायलका लोकप्रिय कलाकारको आवाज प्रयोग गरिएको छ । यसले कुनै पनि पक्ष नलिइकनै विभाजनको आतङ्क प्रस्ट्याएको छ । र, फिल्मको सफलता यहीँनेर छ ।
लिजेन्ड अफ डिस्ट्रक्सन फिल्म पहिलो पटक जुलाईमा रिलिज गरिएको थियो । यो फिल्मको सोच उनलाई अरब आन्दोलनताका आएको थियो । अरब स्प्रिङ भनिने सो आन्दोलन पछि इजरायलको छिमेकी सिरियामा आइपुग्दा मुलुक नै गृहयुद्धमा मात्र फँसेन, देश नै क्षतविक्षत बन्न पुग्यो । उनलाई त्यो बेला अझ प्रस्ट भयो, इतिहासले कसरी आफूलाई दोहोर्याइरहेको छ ! कसरी मानिसहरू त्यसबाट पाठ नसिकी आफैँलाई समाप्त गरिरहेका छन् !
गएको मे महिनामा इजरायलमै अरबी मूलका मुस्लिम र यहुदीबीच कुटाकुट मात्र भएन, त्यसले सानोतिनो गृहयुद्धको झल्को नै पेस गरेको थियो । यति मात्र होइन, जुन महिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु सरकार अपदस्त गर्न भएका चार वटा चुनाव गरियो तर पनि परिणाम निस्किएन । अन्ततः नयाँ सरकार झिनो बढतले बनाउनु पर्यो। राजनीतिले वातावरण यति बिगार्यो कि फिल्म निर्देशक दार फिल्मलाई चाँडै नै रिलिज गर्नुपर्ने निधोमा पुगे । नभन्दै फिल्मको जुलाई रिलिज यता निकै ठूलो चर्चा भयो र संसदमा समेत फिल्मलाई उदाहरणका रूपमा पेश गर्न थालियो ।
‘तपाईं बडो दुःखले माथि पुग्नु हुन्छ, सम्पन्न हुनुहुन्छ र नियतिले त्यसपछि तपाईंलाई कुबुद्धि छिराउँछ र तपाईंको पतन शुरू हुन्छ,’ फिल्म निर्देशक दार भन्छन्, ‘हामी त्यही पतनको सङ्घारमा छौँ ।’
२३ आश्विन २०७८ १४:५७
एनिमेटेड फिल्मद न्युयोर्क टाइम्स